Ity tranonkala ity dia manana tanjona roa:
Voalohany: Manao motera sambo sasantsasany sasantsasany isika. Ity tranonkala ity dia natao ho loharano hanampy ny hafa hanao toy izany amin'ny alàlan'ny fanadihadiana ny dingana tsirairay amin'ny antsipiriany bebe kokoa noho izay mety ho hitanao ao amin'ny boky torolàlana iray. Raha manana motera ivelany izay mitovy amin'ny iray amin'ny tetikasa izahay dia tokony ho afaka hampiasa ity tranonkala ity mba hanampiana ny hampifanaraka ny sambo fiaramanidina ivelany.
Faharoa: Nalaina tao amin'ny tranombarotra fivarotana ity tranonkala ity. Ny hevitra dia ny hampisehoana lisitry ny ampahany izay mifanaraka amin'ny motora Johnson / Evinrude / OMC / BRP. Raha tsindrio ny rohy "Motor List" ambony etsy ambony, dia hahita ny môteranao ao amin'ny lisitra ianao ary mahita lisitry ny ampahany amin'ny motera miaraka amin'ny rohy Amazon sy eBay mba hanampy anao hahita ny ampahany ilainao ary mahazo fifanarahana tsara amin'ny ny dingana.
Natomboka tamin'ny 13 ity tranonkala ity taona maro lasa izay ary nanampy olona an'arivony, manerana an'izao tontolo izao, hitondra ny môtô-boatin-tsambo efa ela. Arakaraky ny fiasako amin'ireo motera malaza ireo, ny fitiavako azy ireo. Raha mivoatra ity tranonkala ity, miasa amina tetikasa vaovao sy lahatsoratra ho an'ny fahafinaretanao aho. Tena sitrana ity tranonkala ity.
Nanjary lasa iraisam-pirenena ity tranonkala ity. Azonao ampiasaina ny safidy amin'ny fiteny ary misafidy amin'ny fiteny 120! Rehefa tsindry amin'ny rindrambaiko Amazona na eBay, ianao dia mifantina amin'ny tranonkala mifanaraka amin'ny toerana misy anao, ny vola, ary ny fiteny. Toa tsy misy sisin-tany, politika, na fitenenana ny môtô avy any ivelany, ary ity tranonkala ity dia misy ho an'ny rehetra mba hankafy.
Azafady mba ampio fanohanana ity tranokala ity sy ny tetikasa ho avy amin'ny fampiasana ny rohy fanananay rehefa mividy ampahany. Ny zavatra rehetra nividy amin'ny alàlan'ny fitaovam-pikarohana Amazon.com dia hanampy ny tranonkala. Amazon.com dia afaka mamonjy anao vola satria matetika izy ireo dia mizara ny ampahany ihany amin'ny mpivarotra mifaninana. eBay dia toerana tsara hijerena ny vidin'ny bargain, ary koa ny ampahany tsy fahita sy ampiasaina. Hitanareo matetika ny fahasamihafana goavana eo amin'ny mpivarotra na ny lisitry ny lisitry ny lisitra, ny Amazon.com vidiny, ary ny vidin'ny eBay. Afaka mamonjy vola be ianao amin'ny fipihana ny rohy. Rehefa mividy ampahany amin'ny fampiasana rohy Amazonie na eBay izahay dia mahazo momba ny komisiona 5% izay ampiasainay mba handoavana ny tetikasa sy ny fampiantranoana ny saram miafina mifandraika amin'ity tranonkala ity. Tsy misy fandaniana fanampiny ho anao rehefa mampiasa ny rohy hividianana entana ianao ary hanohana ity tranonkala ity.
Manasa anao koa izahay hijery ny rohy "Comments" eo ambony.
Hamaky bebe kokoa momba ny azonao atao ny manamboatra ny motera sambonao ary miverina amin'ny rano nefa tsy mandany vola be amin'ny mpivarotra an-dranomasina.